Uyini umehluko phakathi kwe-Oakley Flak 2.0 ne-flak 2.0 XL? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ukubuyekezwa kwe-Oakley flak 2.0 xl - indlela yokubhekana
Ukubuyekezwa kwe-Oakley flak 2.0 xl - indlela yokubhekana
Uyini umehluko phakathi kwe-Oakley Flak 2.0 ne-flak 2.0 XL?
Amalensi weI-Flak 2.0 XLmude futhi asikwe ezansi ezungeze izihlathi zakho ukuze uthole ukumbozwa kokugcina ngenkathi ugwema ukuthintana nobuso bakho. I-I-Flak 2.0inechassis yohlaka efanayo neI-Flak 2.0 XLkepha ifaka amalensi amafushane ayindilinga phansi.UMar 4 2021
Ngakho-ke ngiphethe amajakhethi we-Special Edition Team USA Oakley flak kuma-Olimpiki ka-2012, ngakho-ke nali ibhokisi elihle njengezibuko zelanga ezimhlophe ezibomvu nezimhlophe ezithi I-United StatesOlympic Team ngokuvalwa kwezindandatho u-Oh Cleohmm ngakho-ke Ithi ithimba le-Team USA flak xljdark grey elinamalensi ampunga, ngakho-ke ebhokisini ngokusobala iza nezibuko necala nokuthi kungenziwa kanjani esikhundleni sokuthengwa kwamalensi kusekela amaqembu e-US Olimpiki neParalympic, ngakho ngicabange ukuthi lokho kuhle futhi kuhle ukuthi angene ngaphakathi bese nazi izibuko uqobo, zingena ngecala elimnyama nje elijwayelekile lapha, yonke imidlalo iyeza ngiyayivula futhi une-micro-pocket ekhethekile ene-United States Olympic Team kuyo injengeyasolwandle okuluhlaza okwesibhakabhaka ngaleyo migqa ebomvu futhi emhlophe ebomvu futhi emhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka okusobala futhi uma ubona kufana nomnyama. Idizayini yendandatho yama-olympic yayifana nebhokisi ngakho-ke kuhle kakhulu bese kuba kwizibuko lapha, ngakho-ke ngaphezu kwebhokisi kufanele ize nengcezu yekhala eyengeziwe nayo enkulu, kepha ngiyitholile ku-eBay ngesephulelo esingu-40% futhi ikwenze 'ngangeza ukuthi akuyona, ngakho-ke ungakhathazeki kakhulu, kepha kuyisibonakaliso esincane nje lapho, kepha ezibukweni lapha, ngakho-ke zinohlaka olumnyama olumnyama, amalensi asobala nje mpunga, kepha ekhoneni ithi I-Team USA khona kanye kulensi iyalunywa ngakho ngithole ukuthi kuhle lokho futhi kuza namabala endlebe aluhlaza okwesibhakabhaka lapha isithonjana simhlophe ngesikhungo esiluhlaza sasolwandle nangaphezulu kwelensi eqoshiwe engakwesobunxele futhi inomugqa obomvu nomhlophe ku-Shia okungukuthi ubupholile impela uzama ukugcina okubomvu, okumhlophe nokuhlaza okwesibhakabhaka lapha, ngakho-ke ngaphakathi kuthi inombolo ye-serial emnyama ino-O futhi lezo zingxenye zimnyama, azilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njengama-masokisi endlebe ase-US futhi lawa yi-G Lasers, ukubuka nje okusheshayo i-eally white lightweight ebenza bakulungele ukuzivocavoca umzimba I ngiwasebenzisela ukugijima, uh, amasokisi endlebe, isiqeshana sempumulo, awahambi, awayi ndawo, anethezekile futhi anamathela ngokuqinile ebusweni bakho, eh, ngakho-ke ngihambe njengamathani enyama amabanga amaningi kuwo futhi angabanga nazinkinga ngakho izibuko nazo zinokumataniswa kwe-hydrophobic njengalapho ngijuluka lapha kuvele nje kuqhamuke bese kwehla izinhlangothi okuyinto enhle kakhulu uh inketho yomuntu siqu engikhetha eyami enkudlwana isiqeshana sekhala esivelela kancane, itomu nje elinethezekile ebengithi livame ukuba nalo phambilini kepha ngingavele ngithenge enye iphela hhayi into enkulu kepha bengizoyisebenzisela ukugijima noma ukuhamba ngebhayisikili noma ukuncoma yonke imidlalo oyisebenzisayo ' d kube ngumbhangqwana omuhle impela, ngisho nomdlalo owodwa nje, ngakho-ke kukhona Oakleyflak Jacket xlj Team USA S pecial edition special
Ngabe i-Oakley Flak 2.0 ilungele ukusebenza?
OkushaI-Flak 2.0I-XL izwilekuhle, kokubili emgwaqeni nangaphandle.Oakleyuthathe iziciabagijimiiligugu kakhulu — ifreyimu engasindi, eqinile ehlala endaweni futhi enamalensi asezingeni eliphakeme — futhi ayifaka ku-I-Flak 2.0Idizayini ye-XL. I-I-Flak 2.0I-XL ifaka amalensi amade kancane, futhi ngikuthokozele ukumbozwa okungeziwe.
Umkhankaso we-One Obsession uyingxenye enkulu yomlando wakamuva ka-Oakley. Kungumqondo wokuthi iningi lethu, iningi lethu, likhathazekile ngemidlalo esiyikhethile. Kepha abaningi bethu bakhathazekile ngama-Oakleys futhi.
Futhi umuntu oyedwa ophawula lelo bhokisi nguBrian Takumi. Usebenze lapha iminyaka engu-21 manje. Ungu-VP weBrand Creative futhi wayibhala ngokoqobo le ncwadi ku-Oakley.
Futhi uzosidlulisa kuma-Oakleys akhe ayisikhombisa apholile kunawo wonke, athandeka kakhulu, futhi abaluleke kakhulu kunaso sonke isikhathi. (umculo oshubile) Kulungile, ngilangazelele lokho. Singadedela umusi ngezibuko zelanga.
Sinezinto esizikhethayo ngaphambi kwakho lapho ucabanga ukuthi zibaluleke kakhulu noma izigqoko zakho ozithandayo ze-Oakley zaso sonke isikhathi. Sizoqala kuphi? - Ngicabanga ukuthi into yokuqala esiyenzayo ukuqala ngokuqala kwe-Oakley nezibuko zelanga futhi yilokho okwenziwe ngamehlo. Ngicabanga ukuthi ngaphandle kwalokho ubungeke ube no-Oakley ngendlela okuyiyo namuhla ngoba isiqalise ngempela ngezibuko, ngakho-ke kusobala ukuthi ucezu oluthile lwezemidlalo noluyisicucu.
Ngasikhathi sinye, kusisizile endleleni yethu yokwenza lokho esiyikho namuhla ngezibuko. Ngicabanga ukuthi into elandelayo oyibukayo ngokusobala ingesinye sezinyathelo ezilandelayo kule ndawo, okuyiRazor Blade. Ngoba ngicabanga ukuthi ngenkathi le bekuyingxenye esize u-Oakley ukuyakha, iRazor Blades mhlawumbe bekuyingxenye eyichaze kahle, ukuphuma kulowo mhlaba we-niche wezemidlalo yamabhayisikili neqhwa nokunye okunjalo futhi ukungena kuleyo nhlanganisela yokusebenza kwezemidlalo, yiba izingilazi zokuphila ongazigqoka nsuku zonke.
Ngakho-ke uma ubheka iRazor Blade ayisebenzisi nje kuphela kwezemidlalo kepha ingagqokwa njengento yansuku zonke. Futhi ngokuqinisekile eminyakeni edlule lolu hlobo, ukwakheka kwelensi, izingwegwe zezindlebe eziyingqophamlando seziyinsika encazelweni yezingilazi zezemidlalo. - Yebo, futhi ngiqonde ngoba zazisetshenziswa kwezemidlalo.
UGreg LeMond wayegqoke izigqoko zokuwina iTour de France, akunjalo, ngo-1989? Futhi-ke futhi manje, ngabe uFarrell Williamshad ubengumbhangqwana othandekayo ogcwele idayimane muva nje? - UFarrell Williams unebhangqa elihle elisethwe ngedayimane, ibhangqa legolide eliqinile ayelenze ngamatshe ayigugu, - Ibhangqa legolide eliqinile. - ngakho-ke nakanjani itholile indawo yayo kumasiko we-pop, umlando kanye namanje, ngakho-ke lesi yisikhathi esichazayo - nokwenza ngokwezifiso iRazor Blades, okusobala ukuthi ibingatholakali nama-Eyeshades, kodwa umbala wombala kanye izinketho, ukuqala, kwakuhluke kakhulu phakathi kwalezi zizukulwane ezimbili? - Yebo, ngicabanga ukuthi bekuyiqiniso impela, uJim akabonanga thuba lapha ngezingwegwe ezitholakalayo nezilungisekayo, into abenayo lapho futhi njengoba beqhubeka nokusebenza ngezinsingo zokuthi zazinezingwegwe zezindlebe eziguquguqukayo kepha ngokuqinisekile iqiniso lokuthi ukwazile ukudala ikhithi ye-earphone ayengayithengisa ayithengise ngemibala eminingi nokuthi ungakwazi ukuyenza ngokwezifiso zakho. Leso bekuyisinyathelo sokuqala sokuletha ukwenziwa kube ngokwezifiso empilweni, futhi ngicabanga ukuthi yingakho iRazor Blades empeleni yayinjalo, futhi yaba yinto enesithunzi ngoba ayigcinanga nje ngokwenza ukwenziwa kuyo, kodwa futhi nokukwazi ukukhetha nokukhetha isichasiso somuntu siqu, imibala nobubunjwa nokunye okunjalo. - Kulungile, yini esihambayo lapho? Umbhangqwana wesithathu obaluleke kakhulu. - Ngicabanga ukuthi uma wehla umugqa wesikhathi kungenzeka uqale ngeMumbo M-Frame ngoba nje bekuyisiqalo salesi simiso esifanelekile, umumo we-torque, ofana nomkhakha ongaphezulu kunalowo oyindilinga shape lapha ngakho-ke futhi bekuyisiqalo sokucabanga ngezinhlobonhlobo zamalensi ngakho-ke lesi kwakuyisimo esiyisikwele kakhulu ngenkathi senza lokhu bese sicabanga ukuthi singakulingana kanjani lokho ebusweni bomunye umuntu? Ngakho-ke enye yezinto uJim ayehlala eyithanda, lowo mqondo onamaphuzu amathathu alinganayo owasiza ekuchazeni ukuma lapho iziqu ze-hookier zahamba khona, saya ezihlokweni zezindlebe eziqondile futhi lokho bekuyinto ethile ngakho mayelana nokuthuthukisa lowo mbono bheka ubuso bakho ukuthi ukube ibihleli emuva lapha ngabe ihlezi lawo maphuzu amabili khona lapha nasekhaleni lakho futhi ibinomqondo wokulingana kwamaphuzu amathathu, yingakho, uma ubheka lezo zinhlanga zinesando intshontsho, yayine-trigger, yayinokuma kulolo hlangothi ngenkathi ifreyimu engu-M ubona isiqu siphuma futhi sibuyele emuva futhi lokho bekungumbono wokulingana okukhona lapha ubambelele ekhanda lakho esikhundleni sokulenga kule ubuso - Kulungile, ngakho-ke siyaphi ngokulandelayo? Kusuka ku-M-Frame yethu kuya- Okulandelayo kimi kungenzeka ukuthi ayinandawo enkulu emlandweni, kepha nakanjani kusizile kancane ukufika lapho sikhona namhlanje, futhi empeleni bekuyikho, ngokusobala umhlaba wokuhamba ngebhayisikili, uyazi iJacket Jacket kakhulu, kepha bekuyilokhu esikwenzele i-Atmosa, i-co-lab e-Australia noma eJapane. futhi into eyayikhona ngayo, lokhu empeleni kukhanya ebumnyameni, wonke lowo mbala, umbala we-celeste, amasokisi, umbala we-celeste uyakhanya ebumnyameni.
Futhi kusobala ukuthi ngaleso sikhathi ukhuluma ngakho, ngifuna ukusho ekuqaleni noma ngo-2010, emuva lapho sakwenza lokho, noma ngasekupheleni kweminyaka yama-2000. Ngokusobala kwakungelula ukwenza into efana nalezi ezibukweni, futhi, kunemininingwane eminingi kuyo, lokhu kwakufanele kufuthwe ngesandla, ngaphezulu kwalokho, ukuze umbala okhanya ebumnyameni ungazicimi, ngasikhathi sinye imininingwane esiyifaka ku-Aee omncane egxivizwe ngezikulufo lapho. Lokho kusisizile impela ukusetha ithoni njengoba besicindezela imingcele ekuhlobiseni futhi futhi siqala ukuletha izinto ezithile ezithokozisayo emhlabeni futhi sikuse ezingeni elisha ngokuphelele.
Ukuma okuhle okuyisithonjana kuyaziwa ngoba uGeraint Thomas usakhombisa ifulegi ngesandla esisodwa. - Usekugqokile lokho namuhla - Ingabe ulingeka ukuba umenzele izithandani kulo nyaka? - O, iya emuva naphambili. Ngicabanga ukuthi ningabagibeli bamabhayisikili ngakho-ke niyazi ukuthi kunzima kwesinye isikhathi, njengoba Ngenkathi sizama ukwenza isimo sibe ngcono, sethula ubuchwepheshe obusha, abanye abantu bakuthola kunzima ukugqashula kulokho ngemuva kweminyaka eminingi kangaka begqoke abakunethezekile ngakho-ke ake sibheke ukuthi singakusebenzisa kanjani iqiniso lokuthi usagqoke ijakhethi yomjaho futhi ucabange izindlela ezinjengokuthi, kulungile, kahle, esikhundleni sokusebenzisa nje umugqa okhona, inketho ikhona ukwenza okuthile naye noma ukwenza okuthile ekhethekile kuye, noma sikuphefumula kanjani impilo entsha ku-Racing Jacket? Yiziphi izinketho? - Yebo, kulungile, kuhle.
Kwesokudla, ngakho-ke kusukela ekusebenzisaneni kweSuper Limited Edition, siya kuphi okulandelayo? ngoba yenziwa njengohlobo olulinganiselwe lweJapan. Ngicabanga ukuthi into eyodwa ine-pl ekhethekile
Inhliziyo yami yilokhu esisanda kukwenza kuma-Olimpiki eKorea, futhi lokho bekuneHarmony Fade. Futhi ngakho-ke sihlala sizama ukuba nemibala kubadlali bethu kuyo yonke imidlalo yama-Olimpiki, noma ngabe kusehlobo noma kusebusika. Senza imidlalo eluhlaza okwesibhakabhaka imidlalo embalwa yasebusika, eRio saba nalokhu kufiphala okuluhlaza, kepha ngicabanga ukuthi lokho bekuyinto ekhethekile kimi.
Ngenkathi iqembu lami lihlala lisebenza kulo, ngicabanga ukuthi lokhu kuhlala kunendawo ekhethekile enhliziyweni yami ngoba bengikusebenzela ngempela. Ngakho-ke lesi yisibonelo sokuqala esidwetshwe ngesandla esasifuna ukukwenza, ncamashi ukubukeka okungu-50-50, yin ne-yang okwakudwetshwe egalaji lami, ucezu lomqondo nje, okwakwenziwa ukucabanga ngalokho esasikufuna Ama-Olimpiki angakwenza. - Lokho kungaba ifulegi lezwe elipholile, akunjalo? IHarmony Fade. - Yebo, yebo, yebo - ngicabanga ukuthi lokho kuzoba, yebo, yebo - Yiba yifulegi lethu - Yebo, asihambe. Kulungile-ke, ngakho-ke siye savalelisa kokuhlukahluka kombala we-edishini elinganiselwe - Ucezu olulandelayo Ngicabanga ukuthi kungisizile ukuthola ukuthi lo mkhiqizo ungaya kuphi ngempela lowo mbono uvela eFrogskins Lite.
uhlelo lokuqeqeshwa kwamabhayisikili
Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi ababukayo lapha ukuthi izibuko zokusebenza kumele zibukeke njengokusebenza. Abagibeli bamabhayisikili manje, ikakhulukazi uma uvela kulo mhlaba, uyazi ukuthi akubona bonke abagibeli bamabhayisikili abayizinhlobo eziphakeme abagibela iTour de France, futhi akuzona zonke izinhlobo zezinhlaka ze-carbon fiber. Kukhona uhla olukhulu lwabafana laphaya futhi abafana bagibela amabhayisikili e-carbon fiber, abafana bagibela i-aluminium, abafana bahamba ngensimbi, abanye abantu bayayisebenzisa, yebo ukuya ohambweni olukhulu lwekhofi noma okuthile, abanye abantu bavele baye emakethe yasendaweni, futhi uma ukhuluma ngayo, noma ukuthola nje umsebenzi nokuhamba, ngakho-ke uma ukhuluma ngayo, yini engaba khona u-Oakley lapho? Akufanele ukuthi uma ngizogibela ibhayisikili kufanele ngigqoke okuthile okubukeka sengathi ngigibela iTour de France.
Kungenzeka kufane nokuthi, ngihamba ngebhayisikili kodwa kwesinye isikhathi ngifuna ukuhamba ngezinyawo, ngifuna ezinye zalezi zici kepha akudingeki ngibukeke sengathi ngigijima - Ngipholile. Kulungile ngakho-ke hlala nesithandani esisodwa, lezi ababukeli bethu abaningi abangeke bazijwayele. - Yebo, isithunzi, zifana kakhulu nohlaka lwe-M noma i-radar, kepha empeleni lokhu kungenye yezibuko zethu zamasosha nami cabanga ngenkathi ezempi kwesinye isikhathi kungaba yisihloko esibucayi kakhulu, ngasikhathi sinye kunenjongo enkulu njengomkhiqizo futhi wena ngicabanga ukuthi, njengomkhiqizi wezingubo zamehlo, kusho ukuthini iso? Futhi ngicabanga ukuthi ngithole ithuba lami lokuthola ngoba sike saya esibhedlela lapha eMelika esisebenza ngamasosha ethu abuya phesheya kwezilwandle futhi ahlushwa uhlobo oluthile lokunqunywa.
Ngakho-ke sayokumbona futhi sangena egumbini lalelo sosha futhi wayesehlulwe izingalo zombili ngumoya futhi sangena futhi wayazi ukuthi sivela e-Oakley wathi, 'Siyabonga ngalokho enikwenzayo' uhleli lapha ukhuluma nalomfana owadela izitho zakhe zombili. ' Hhayi ngiyabonga ngalokho okwenzile. 'Futhi into elandelayo kungenzeka ishintshe umbono wami kulokho esikwenza kakhulu, kepha wathi,' Ngicabanga ukuthi awuqondi ukuthi wenzani. 'Uthe,' Ngilahlekelwe yizingalo zami zombili futhi bazonginikeza izingalo ezintsha, kepha ukube bengingenawo ama-Oakleys ami bengizolahlekelwa ukubona futhi bengingeke ngiphinde ngibone indodakazi yami encane okusho ukuthi singaba nempilo yokushintsha umuntu ngezibuko futhi ngicabange ngalokho esikwenzayo, oh, ngibukeka ngipholile kulowo mbala noma izinto ezinjengalezo nezinto eziqhubekayo kodwa esikhundleni sazo zonke izinto ezingaba khona emzimbeni wakho manje, iso, ukubona kusewukuphela kwento ongeke ukwazi ukuyishintsha, futhi uma ucabanga ngayo sizwa izinto ezinjengokuthi, oh, le ndlela ayipholile r lesi simo sipholile noma ngibukeka sipholile kuso, ungashintsha ngokoqobo okomuntu Impilo futhi ikakhulukazi emhlabeni onjengebhayisikili lapho ikhona, ingabe sicabanga ngezibuko zelanga njengokuvikela ilanga lapho ilanga likhanya noma ngibona umgwaqo? mayelana nokuthi bangaki abantu abashayela ebusuku, noma uqala ukushayela ngaphambi kokushona kwelanga noma umise ukushayela kwakho ngemuva, noma uqala ukushayela ngaphambi kokuphuma kwelanga bese uqeda ukushayela ngemuva kokushona kwelanga futhi ucabanga ukuthi ilanga kalikhanyi ake ngithathe izibuko zami kodwa ucabanga ngakho, wow kuthiwani uma kukhahlelwa itshe ebumnyameni? Futhi awusakwazi ukubona leli litshe emgwaqweni.
Kunzima kakhulu ukubona lapho kungekho ukukhanya. Futhi kulula kanjani ukuzamazama, noma ngabe uhamba wedwa, noma uhamba ngemoto, noma ngabe useqenjini labayisihlanu bese othile edudula itshe, okungashintsha impilo yakho ngokoqobo. - Yebo, indaba ehlobene kuya Izibuko akukhulunywa ngazo kaningi lapho uhamba ngebhayisikili.
Njengoba besho, kulula ukuzikhathaza ngokusebenza kwezibuko wena noma isitayela sazo, kepha empeleni iqiniso lokuthi kufanele sizigqoke kwasekuqaleni, ngamehlo ethu - Futhi yilokho uJim ahlala akhuluma ngakho. Senza izibuko zelanga, sivikela iso. Futhi yingakho ubona ezinye zezinto ozibonayo ngazo zonke izivivinyo zethonya nezinto ezinjalo.
Singahlala phansi sihambe, awu, akekho umuntu ozongidubula ngesibhamu, noma akekho umuntu engizophonsa isisindo samakhilogremu amane ebusweni bami. Ngasikhathi sinye, akuthathi amakhilogremu amane ukuvimba ukubuka kwakho. Kuthatha idwala elikhulu kangaka nje elingangqongqoza okungakuphuphuthekisa unomphela Isivinini Esiphezulu umthelela omkhulu wesisindo ungabonakala ngokweqile, ngokuqinisekile kuzoba kuncane kunalokho okungasusa iso lakho, ikakhulukazi uma ungaphezulu kokuhamba ngebhayisikili futhi ugibele umgwaqo noma ukhuluma ngazo zonke lezo zinto, ukuhamba ngebhayisikili entabeni. ake sikuthathe ngomkhondo ojikijela ukungcola ebusweni bakho kuphela uzokhumula izibuko zakho ngoba alikho ilanga.
Kufana nokunamathisela ubuso bami ngemuva kwesondo bese ngikuphonsa izinto. Kumayelana nokuvikelwa kweso. - Yebo, umyalezo wokugcina obalulekile ngemuva kokuxoxa ngefomu, ukusebenza, isitayela futhi, manje, ukuvikelwa.
Sazise emibhalweni engezansi ukuthi yikuphi kulokhu okuyizintandokazi zakho futhi uma intandokazi yakho ingekho lapha nakanjani uzonika isithupha esikhulu ukubonga uBrian. Bekumnandi kakhulu ukukhuluma nawe. - Ngiyabonga, ngikwazi nje ukudlula kulokhu.
Kusho ukuthini i-XL ngezibuko zelanga ze-Oakley?
IniIngabe'XL'kushophakathiIzibuko zelanga zika-Oakley? 'XL'ichaza ifreyimu ngosayizi omkhulu. Kuvamile ukuthiOakleyukwethula imodeli bese udala enkulu, 'XL'ifreyimu efanayo kepha ngobukhulu obukhulu. KonkeOakley'XL'i-sunglassukuhlinzekela amakhanda amakhulu.Meyi 5, 2020
Sanibonani nonke, namhlanje ngizonikhombisa ozimele bencwadi kadokotela kanye namafreyimu ezibuko zelanga engithole ku-Oakley ukuthi sihle ngamakhanda abanzi. Ngakho-ke kuhlole nonke, nangu uKen osenyakatho yamaViking nsuku zonke. Futhi uma umusha kulesi siteshi, kumayelana nezibuyekezo nokuthi ungakwenza kanjani, ngakho-ke shaya inkinobho yokubhalisa ukuze ungaphuthelwa yimibhalo elandelayo? Ngakho-ke namuhla sikhuluma ngezingilazi ze-Oakley zamakhanda abanzi, futhi uma ufana nami futhi unenhloko ebanzi, kungenzeka ukuthi uke wakuthola kunzima ukuthola izingilazi ezifanele ozithandayo namuhla.
Sikukhombisa amafreyimu ama-Oakley engiwathanda ngokuphelele, futhi ngijabule kakhulu ukuwabelana nawe. Ngithenge izibuko zelanga ezimbili ze-Oakley engizithandayo emakhanda abanzi. Ngakho-ke nami ngizokukhombisa lezi Ngakho-ke ngizofaka izixhumanisi zazo zonke lezi zibuko encazelweni engezansi ye-Amazon.Uma ufuna ukuzicosha ngokwakho, ungazithola lapho, ngaphandle kwaleli bhangqa lokuqala Ngizokukhombisa ukuthi awukho Nawe awukho e-Oakley, ngicabanga ukuthi bayanqanyulwa, kepha ungabathola besha sha ezitolo zezingubo zamehlo kanye naku-eBay, ngakho-ke ngifuna ukukukhombisa nalokhu, ngoba Ngibathanda kakhulu, ngakho-ke kubizwa amafreyimu okuqala, esizokhuluma ngawo, i-Oakley Servo XL futhi nginezimbhangqwana ezimbalwa zalawa enginawo.
Lezi zibukeka zinhle impela kanti ezesibili zibizwa ngokuthi zimnyama ezipholishiwe futhi empeleni zenziwa izibuko zelanga. Yebo, lawa akuwona amalensi wangempela e-Oakley. Ziyizibuko zelanga ezibhalwe kadokotela, kodwa futhi, lezi yizindawo ezipholishiweyo, lawa ozimele anguhlaka lweplastiki futhi anomumo oyisikwele wangempela, ofana namaconsi omoya engiwagqoka engizokukhombisa wona ngokulandelayo, kodwa asiqhubeke zibeke endleleni ungabona ukuthi zibukeka kanjani, nazi iziphepho zomoya enginazo manje futhi lezi yiServo XL futhi zikhulu kancane kunezindiza lapho ngibheka osayizi kuwebhusayithi abathi amalensi angama-57 millimeters ububanzi Uma ibhuloho lingamamilimitha ayi-18 ububanzi, ubakaki ungamamilimitha ayi-145 ububanzi, siyaqhubeka futhi sibeka isikhala kulo.
Ungabona ukuthi kubukeka kanjani, amaphuzu amahlanu amahlanu amasentimitha ayisishiyagalombili ububanzi ngakho-ke futhi anethezekile, akhanya kakhulu, futhi azungeza kancane ezungeze ikhanda lami njengoba ubona, kepha senginalo iminyaka eminingana futhi ngijabule ngayo. Amafreyimu wesibili engifuna ukukhuluma ngawo avela ku-Oakley yi-Oakley Airdrops. Empeleni nginamabhangqa amabili alawa.
Ngigqoke ibhulukwe manje. Uyabona ukuthi zinesikwele impela futhi ziyafana kakhulu neServo XL uma uzibuka kahle. Ziyi-plastic frame.
Ama hinge enziwe ngepulasitiki ngokungafani ne-Servo XL, eyayinamabhande ensimbi. Banokumbozwa ngenjoloba ekugcineni kwengalo, kepha lokho bekungekho kuServo XL. Engikuthanda kakhulu ukuthi babambe endaweni kangcono kangcono kune-servo xl futhi banalo hlobo lwendawo epholile ecacile ezungeze ikhala noma ibhuloho lekhala, ngakho-ke ngiyazithanda lezi zibuko futhi lezi zibizwa ngama-satin blocks eminye eneminye imibala .
Kufanele uzizame ku-inthanethi, kodwa qaphela ngoba lawa amabhuloho angu-18 millimeter. Kukhona ezinye ezincane, ngakho-ke uma ufuna ezinkulu i-18mm bridge oyifunayo futhi amalensi alawa angama-57mm ububanzi futhi. Futhi lapho ngifaka irula ngaphezulu bobabili bangu-5 no-5/16 ngakho-ke mhlambe bangu-1/16 kuncane kune-servoxl kepha ngokulingana balingana kahle impela futhi ngiyabuthanda impela ubuso obumbumbulu ebusweni bami.
Izingilazi zesithathu engifuna ukukukhombisa zona namuhla yizibuko zelanga ze-Oakley.Manje bengilokhu ngifuna izibuko zelanga ze-Oakley iminyaka futhi ekugcineni ngithole into engiyithandayo yobuso obubanzi. Lawa yi-Oakley Mainlink XL, futhi bakhuthaza le ndatshana.
Ngangijabule kakhulu ukumthola. Nangempela ngathenga amapheya amabili. Manje.
Lezi zimnyama ngombala onamalensi wamaPrizm ahlukanisiwe. Lokhu kuhlukanisiwe, lezi akuzona izingilazi zikayinki ezimpunga ezinamalensi wesafire prismatic futhi ngizokhuluma ngamalensi ePrizm ngomzuzwana. Sigxumela kwikhompyutha yami, kodwa muhle kakhulu.
Ake ngiwagqoke, asebenza kahle ngobuso obubanzi futhi lawa anelensi engu-61mm enebhuloho elingu-17mm futhi lapho ngifaka irula phezulu ububanzi bungamayintshi ama-5 no-5/16 afana kakhulu nohlaka lwama-airrop, thina sizibuka nje bese ngiphonsa nalaba abanye lapha futhi. Ukuze ubone ukuthi zibukeka kanjani. Ngithanda okuluhlaza okwesibhakabhaka kuma-lens futhi ungathola lawa amalensi kadokotela avela ku-Oakley.
Ngakho-ke kunezinhlobo eziningi zemibala ongayikhetha, ozokhonjiswa yona lapha e-Amazon, ngakho-ke ake sifinyelele kwikhompyutha yami kodwa uqiniseke ukuthi uyala eyodwa enobubanzi bamalensi ayi-61 millimitha ozoba muhle futhi ubanzi i-Oakley mainlink xl gxuma futhi kwikhompyutha bese ukukhombisa ukuthi iprizmTechnology imayelana nani. Kulungile ngakho ngilapha kuwebhusayithi ye-Oakley sizobona ukuthi bathini ngamalensi e-prizm. Ngakho-ke bafika ngemibala ehlukahlukene enhlobonhlobo namalensi apholishiwe nangaphandle.
Kunconywa ukuzivocavoca nsuku zonke
Ngakho-ke bathi bayibone ku-prizm futhi yilokho abathi i-prism ubuchwepheshe be-Oakley glass eyenzelwe ukuthuthukisa umbala nokuqhathanisa ukuze ukwazi ukubona kabanzi. Ngiqaphele nakanjani ukuthi lezi zibuko zelanga zinemibala egqame kakhulu ngalezi zibuko zelanga futhi yonke into ibukeka ithuthukile, lezi zibuko ziyamangalisa njengoba imithetho yephuliwe ukudala umhlaba ocacile futhi ophilayo nombala njengoba ngishilo ngaphambili kumnandi nje kuwo Ukuchaza okuhlukile ukukhulisa ukuqonda okujulile nokuqokomisa izici emvelweniNanombolo 3. Kusho lokho ongakuboni ngeso leso futhi futhi, njengoba ngishilo lamalensi kuze kube manje.
Ngangimthanda ngokuphelele. Ngingawancoma impela la malensi e-Oakley prism. Ukuqhubekela kuthebhu elandelayo i-eBay, ngakho-ke sibheke amafreyimu okuqala, okwamanje amasha sha ku-ebay.
Babiza amadola ayikhulu namashumi amane namasenti angama-80 ngalawa mafreyimu e-Oakley, futhi nalokhu akusekho kuwebhusayithi yabo. Ngicabanga ukuthi zimisiwe kepha ungazithola zintsha sha lapha ku-eBay futhi ngizithole ezitolo ezimbalwa ezahlukahlukene zamehlo ukuze ukwazi ukusesha kalula lokhu ku-google noma uthayiphe i-punch ebay. Ngokulandelayo sise-Amazon futhi sonke futhi.
Ngizofaka izixhumanisi zalezi zibuko nencazelo engezansi ukuze uzithole kalula. Uzothola izingilazi ze-Oakley Airdrop. Ngigqoke lezi zibuko njengamanje.
Ngiyazithanda lezi zibuko engizigqoka nsuku zonke futhi okwamanje zibiza kuphela amadola ayikhulu namashumi ayisikhombisa nantathu e-Amazon futhi ekugcineni kuthebhu elandelayo manje ungathola izibuko ze-Oakley Mainlink, sihamba ngemibala engena kuma-61 amamilimitha okuyimodeli yeXL phansi ezansi qiniseka ukuthi ukhetha amamilimitha ayi-61. Kunosayizi abancane, ngakho-ke uma ufuna lawo milimitha angama-57, 56 kanye nama-58, sizovele sibheke ukuthi yimiphi imibala etholakalayo kuma-61. Ngakho manje i-Ink Prizm Sapphire empunga isesikrinini.
Lezi yizibuko eziqondile enginazo. Bangamalensi e-prizm, uma ehlukanisiwe athi prizm P, uma kungenjalo athi nje prizm futhi lawa awapholishiwe ayatholakala ama-matte black prizm amnyama manje apholisiwe lawa ahlukanisiwe futhi ungabona futhi ukuthi i-prizm P ku I-Corner futhi lezi ezinye izingilazi engizithengile Ezilandelayo ziyatholakala yi-matte emnyama Prizm Grey Ngakho-ke azifakwanga polarized, kodwa bheka bheka kukhona ibala elimpunga ethempelini lezibuko, elilandelayo lihle impela. Babizwa nge-prism green tismsten tungsten futhi futhi abahlukanisiwe Baluhlobo oluhlaza okomnyama nge-hue ewolintshi yelensi Bahle kakhulu futhi abalandelayo bavutha Umlilo yilawa amnyama aphucuziwe ngePrizm Ruby ahlukaniswe kuhle uma uya olwandle lawa ayamangalisa futhi futhi amamilimitha ayi-61 ahlukaniswe ngalokhu futhi okugcina okufika ngamamilimitha angama-61 yiPoseidon Prizm eguquguqukayo emnyama futhi futhi lokhu akuzona izinhlaka ezihle kakhulu ongazithola ngakho-ke mina ngiyethemba le ndatshana ikwazile ukukusiza ukuthi uthole izibuko ze-Oakley zekhanda elibanzi uma unikeza lesi sihloko isithupha.
Futhi, khumbula ukubhalisela i-Northern Viking nsuku zonke njengoba nginezindatshana eziningi engingathanda ukuhlanganyela nawe, ngiyabonga kakhulu ngokubuka futhi sibonane ngokuzayo. Qaphela
Ingabe amalensi we-flak 2.0 azolingana ne-flak?
I-XLJamalensikanye neZingaamalensizombili ziyashintshana kufayela le-Ijacket ye-Flakozimele.
Ngabe i-Oakley Prizm ingcono kune-polarized?
I-Oakley PRIZM ihlukanisiweamalensi alungele ukwehla kwelitha futhi anconyelwe imisebenzi yamanzinomaukushayela. Ngaphandle kwaUMKLOMELOAmanzi Ajulile kanyeUMKLOMELOAmanzi angajulile, i-UMKLOMELOamalensi ezemidlalo awekhokuhlukaniswe.Februwari 18 2021
Uyini umehluko phakathi kwe-Oakley polarised ne-Prizm?
AbanyeOakley Prizmamalensi angamakuhlukaniswe, okusho ukuthi zifaka isihlungi esivimba ukukhanya okuvela ekukhanyeni okukhanyayo.I-Prizmamalensi awashokuhlukaniswe—Ubuchwepheshe belensi obuhluke ngokuphelele. Ngenkathikuhlukanisweamalensi avimba ukuxhopha ekukhanyeni okukhanyayo,I-Prizmamalensi akhulisa lokhu okubonayo.
Ingabe i-Oakley Flak 2.0 ihlukaniswe?
I-Oakley Flak 2.0Izibuko zelanga ze-XL ziyinkosi yakho kukho konke ukuhweba, ukwenzelwa noma ikuphi ukuphishekela ezemidlalo. Ukuqhakambisa ukumbozwa kwelensi okuhle kakhulu ekwakhiweni kwesigamu, ama-nosepads we-Unobtainium nezindlebe zezindlebe ngokuphepha zibamba ubuso ngokulingene nokunokwethenjelwa okulingene ngisho nasebusweni besenzo.
Uyini umehluko phakathi kwe-Oakley XL neXLJ?
Amalensi ajwayelekile amafushane (phezulu kuye phansi) futhi afaka ukusika okuyindilinga ngaphezulu ezansikailensi.XLJamalensi made futhi anokusikwa okufana nokugqagqana phansi. Lawa malensi ahlinzeka ngokumbozwa okuningi kunamalensi ajwayelekile.XLJamalensi ayatholakalaye-OakleyIjacket yeHhafu neJacket yeFlak.Ephreli 5 2020
Ngabe amalethsi amaHalf Jacket 2.0 azolingana nejacket yesiqingatha?
XLamalensi azolinganangokujwayelekileIjacket engu-2.0frame, futhi okuphambene nalokho - ngakho-ke uma ufuna inketho yokushintsha, lokhu kungenzeka. Qaphela ukuthi i-'XLJ 'lensukubizwakuthandaazisebenzi ngendlela efanayo, azishintsheki phakathi kwe-XLJ, XL namamodeli wosayizi ojwayelekile.
Ingabe i-Oakley Prizm iwufanele?
IngabeI-PrizmAmalensiibiza imali? Akukho ukungabaza okukhulu ngalokhoI-Prizmamalensi enza ukuthuthuka okuphawuleka ekucaceni okubukwayo, ikakhulukazi ngombono wangaphandle. Kukhona izinzuzo ezibalulekile zabasubathi ekuhlungeni 'umsindo obukwayo', ukuthuthuka ekuboneni kokujula nokungezwa okwehlukile kuma-wavelengths ombala abalulekile.
Ingabe amalensi e-Oakley Prizm akulungele ukushayela?
Ama-Oakley Prizm Lensesnakanjani siyintandokazi yethuamalensi okushayela! Leziamalensihhayi nje ukunciphisa ukukhanya kodwa futhi nokwandisa umbala nokuqhathanisa ukugqamisa izingozi nokunciphisa ubunzima bamehlo. Ngenkathi kukhona amathaniAma-Prizm Lenseskuyatholakala, singancoma ezimbili ze-ukushayela:I-PrizmUmgwaqo kanyeI-PrizmIhlukaniswe nsuku zonke.Meyi 23, 2021
Hlobo luni lwezibuko zelanga i-Oakley flak 2.0?
Sathenga izibuko zelanga ze-Oakley Flak 2.0 XL Prizm Golf ukuze umbuyekezi wethu azihlole kahle futhi azihlole. Qhubeka ufundele ukubuyekezwa kwethu okuphelele komkhiqizo. I-Oakley Flak 2.0 XL Prizm Golf Sunglasses ifaka ubuchwepheshe benkampani yobunikazi benkampani eyakhelwe eminyakeni yocwaningo lwesayensi yemibala.
Ngabe i-Oakley flak 2.0 XL ilungele ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni?
Ukuthwebula i-Flak 2.0 XL kushibhile impela kunokuthola ipheya elilodwa lokuhamba ngebhayisikili lezintaba, elilodwa lokuhamba ngomzila, elilodwa lokuzungeza idolobha, njll. I-Oakley Flak 2.0 XL isebenza kahle cishe kuzo zonke izinto ezingaphandle, futhi ingababili abaphelele uma ngifuna izibuko zelanga zesitayela sejack-of-all-trades.
Ngabe icala le-Oakley flak 2.0 XL liqinile?
Ama-hinge anamandla kakhulu kunamamodeli amaningi futhi azizwe sengathi angakumela ukuhlukunyezwa okuningi. IFlak 2.0 XL iza nelinye lamacala e-Oakley's Sport Soft Vault. Leli cala aliqinile ngokuphelele, kepha livikela ngokwanele ukuthi ungaliphonsa phezulu kwephakethe lakho futhi ungakhathazeki ngokwephula izibuko zakho zelanga.